जीडीपीलाई बैंकहरूको कुल निक्षेपले उछिन्यो - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > जीडीपीलाई बैंकहरूको कुल निक्षेपले उछिन्यो
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:२६ bampijhyala
१ श्रावण, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको कुल निक्षेपको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी देखिएको छ । कुल कर्जा र बजार पूँजीकरण पनि जीडीपीको आकारलाई टक्कर दिनेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को प्रारम्भिक आँकडाअनुसार नेपालको जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चालू आवको जेठसम्ममा कुल निक्षेप संकलन ४५ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ ।
जीडीपीभन्दा बैंकहरूको निक्षेप ५ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढी भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको जेठसम्मको निक्षेपलाई आव २०७६/७७ को जीडीपीसँग तुलना गर्दा जीडीपीभन्दा निक्षेप १४ दशमलव ३४ प्रतिशत बढी रहेको देखाउँछ । गत आवको जीडीपीको आकार चालू आवभन्दा कम अर्थात् रू. ३९ खर्ब ४३ अर्ब हाराहारीमा रहेको थियो ।
क्रिस्टिन सिंकलर को हुन् ? १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:२६
आईजीपीको प्रस्तावले सशस्त्रमा हङ्गामा १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:२६
माइक्रो फाइनान्स समूहको सूचक २ दशमलव २२ प्रतिशतले बढ्दा १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:२६
के होला कक्षा १२ को परीक्षा ? १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:२६
हजुरको आजको दिन, २०७८ साउन १९ गते, मंगलवार, ३ अगस्ट २०२१ १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:२६